‘घाम झुल्कँदा बाँच्ने आस पलाउँछ’ « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्य » ‘घाम झुल्कँदा बाँच्ने आस पलाउँछ’
‘घाम झुल्कँदा बाँच्ने आस पलाउँछ’
ज्वरोपछि बल्ल तंग्रिँदै गरेको शरीर। पिठ्युँमा बिरामी छोरी। काँधमा औषधि र सामान भरिएको झोला। जलवीर–कात्तिके कच्ची सडकको ढाँडे कटेपछि २६ वर्षीया सीता नेपाली भेटिइन्।
छोरो राजनको अवस्था उस्तै छ। रुघा र ज्वरोले सताएको छ। टाउको मात्र दुखिरहन्छ भन्छन्। ‘एकैपटक दुइटै बच्चा उपचारमा लैजान सकिनँ,’ सीता भन्छिन्, ‘भरथेग गर्न आएका यिनीहरुका बाबु आफैं थलिइहाले।’
‘सरकारले त हेर्दैन, अरू कसले हेर्नु?’ काँधको झोला भुइँमा राख्दै सीताले सुस्केरा छाडिन्, ‘परिवारै बिरामी भएपछि बिल्लीबाठ भयो।’ कमाउन विदेश पुगेका श्रीमानलाई एक वर्ष नबस्दै भूकम्पले फर्कायो। कमाउने सपना त पूरा भएन नै, बरु विदेश जाँदा लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले छट्पटाएको छ यो परिवारलाई।
हिमाली गोल्चे–२ सञ्चगाउँका ३२ वर्षीय चिनबहादुर गोलेको पनि परिवारै बिरामीले ढलेको छ। सातादेखि ओछ्यान परेका श्रीमती फूलमाया र तीन लालाबाल टहरोमै छाडेर औषधि खोज्न झरेका उनी कात्तिके बजारमा भेटिए। ‘जहानजति बिरामी भएर लडेका छन्,’ बिरामी शरीर घिसार्दै दुई घन्टा हिँडेर आएका उनले भने, ‘लेकको चिसोले मार्ने भयो।’
‘ज्वरो, खोकी र दमले च्यापेर केही दिनअघि मात्र गाउँमा ७० वर्षकी एक वृद्धा छिमेकीको मृत्यु भयो,’ डराउँदै उनले भने, ‘ठन्डीले अरू को–को लाने हो कुन्नि!’
सिन्धुपाल्चोकको कर्णाली क्षेत्र भनेर चिनिने पारिका हिमाली गाउँ गोल्चे, गुम्बा, पाङताङ, हगाम, बराम्ची, सेलाङ गाविसमा भूकम्प पीडितको कन्तबिजोग छ। अस्थायी टहरो बनाउन यस क्षेत्रका अधिकांश घरपरिवारले अझै जस्तापाता पाउन सकेका छैनन्। ठन्डीले घरैपिच्छे चिसोका बिरामी छन्। अहिलेसम्म धेरै अप्रिय घटना सुन्नु नपरे पनि औषधि र उपचार अभावमा टहरैपिच्छे बालबालिका र वृद्धवृद्धा लडिरहेका छन्। वयस्कहरु रुघाखोकी, ज्वरोले सताइन थालेका छन्। स्थानीय भन्छन्, ‘यहाँका अधिकांश परिवार मात्र नभई गाउँका गाउँ बिरामी छन्।’
‘झाडाबान्ता लागेर हिजो झन्डै मरेको। धन्न थामियो,’ बिहानीको घाम तापेर आँगनमा सुतिरहेकी बराम्ची–९ ध्यादुङकी ८४ वर्षीया इच्छामाई नेपालले भनिन्, ‘वनतरुलको गेडा कुटेर खाएपछि सास आयो।’ टहरोबाट छिर्ने सिरेटोले चार वटा सिरक ओढ्दा पनि नतात्ने उनले बताइन्।
पहिरोले बाटाघाटा अवरुद्ध थिए। घुमाउरो जँघार हुँदै स्थानीय बाटोघाटो निर्माणमा जुटेका छन्। भूकम्पपछि अधिकांश गाउँ पहिरोले नाकाबन्दीमा परेका थिए। जस्ता खरिद गर्न १५ हजार रुपैयाँ पाए पनि कहाँबाट खरिद गर्ने, कसरी पुर्याहउने मेलोमेसो नै भेटेनन् गाउँलेले। संघसंस्थाले गाडी पुग्ने कात्तिकेबाट जस्ता वितरण गरिरहेका छन्। दुई दिनसम्म पैदल हिँडेर जस्ता गाउँमा पुर्यानउन धौ छ। ‘नाकै ठाकिने ठाडो बाटोमा मुस्किलले दुई पाउ मात्र अट्छन्,’ गोल्चे–१ लिदीगाउँका रुपलाल तामाङ सुनाउँछन्, ‘भर्यााङ हालेर बाटो जोडेका छौं।’
भूकम्पले चुँडिएका दुइटा पुल अझै बनाइएको छैन। पुल नबन्दा गाउँहरु आंशिक नाकाबन्दीमा छन्। अहिले खोलामा फड्के हालेर काम चलाइए पनि वर्षा हुँदा र पानी सतह बढ्दा आवतजावत रोकिन्छ। बोल्देे खोला र नेशम खोलाको पुल चुँडिदा गुम्बा, क्याङसिङ, तेम्बाथान, तेगा, दीपुगाउँमा समस्या रहेको गुम्बा गाविसका सामाजिक परिचालक प्रेम तामाङले बताए। ‘खोलो घट्दा कात्तिकदेखि नाकाबन्दी खुल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘पुल नबनाउने हो भने जेठ लागेपछि फेरि नाकाबन्दी सुरु हुन्छ।’
‘भूकम्पले यसपाली उब्जनी शून्य जस्तै भयो। धेरैले लगाएनन्। लगाएको ठाउँमा पनि राम्रो भएन,’ गुम्बा–३ पाङगार्पु गाउँका चन्द्रलाल तामाङले भने, ‘राहत खान नपाए भोकभोकै मर्छौं होला।’
गाउँलेलाई गाँसभन्दा वासकै चिन्ता छ। उनीहरु भन्छन्, ‘कन्दमुल र कर्कलो खाएर पनि केही दिन धानौंला। बासचाहिँ राम्रो चाहियो।’ उनीहरुले चाहना गरेको राम्रो बास भनेको कम्तिमा लेकको चिसो छल्ने हो। लेकमा फागुन–चैतसम्म चिसोले सताउँछ। ठन्डी सुरु भएको एक महिनामै पीडित कहालिइसकेका छन्। घाम लागेका दिन उनीहरु आज बाँचिने भइयो भनेर खुसी हुन्छन्, नलाग्दा टहरोभित्रै गुट्मुटिएर आत्तिन्छन्।
बिहान झुल्केघाम उदाउँदा गाउँले शरीर तताउन टहरो बाहिर निस्कन्छन्। घाम अस्ताएपछि मात्र टहरोभित्र छिरेर बेलुकी खानाको जोरजाममा लाग्छन्। ‘घाम उदाउँदा आश, अस्ताउँदा निशास,’ पाङताङ घुङा गाउँ दलित टोलका ७० वर्षीय डिलबहादुर बिक भन्छन्, ‘रात नआए नि हुन्थ्यो। चार वटा मन्डी खाप्दा पनि शरीर तात्दैन।’ उनी जस्तै यस क्षेत्रका धेरै बुढाबुढी र केटोकेटी घाम अस्थाएपछि कालोनिलो हुन्छन्।
गाउँलेसँग बाक्ला लुगा छैनन्। ओढ्ने ओछ्याउने छैनन्। राहतमा उनीहरुले केही थान त्रिपाल त पाएका छन्। त्यसले लेकको जाडो के धान्थ्यो? स्याउला, मान्द्रा, पुराना काठपातको टाँड लगाएर चिसो र स्याँठ छल्ने प्रयास नभएको होइन, तर कसैगरी छेकिन्न। गाउँले राहतमा पाएको म्याटमा एकसरो तन्ना बिछ्याएर मन्डी ओड्छन्। ‘रात छिप्पिँदै जाँदा ठिहीले शरीर ठिहिर्यानउँछ,’ परम्परागत आरनमा खुकरीमा धार लगाउँदै पाङताङ–८ का गमबहादुर विकले भने।
जाडोले पठनपाठन प्रभावित भएको छ। ढिलो स्कुल खुले पनि बिरामी र जाडोले केटाकेटी स्कुल जाँदैनन्। हुस्सु फाटेपछि बिहानको ११ बजेपछि मात्र स्कुल खुल्छन्। अस्थायी टहरोमा सञ्चालित स्कुल नाम मात्रका छन्। मान्द्रा र त्रिपालमै स्कुल सञ्चालित छन्। ‘चिसोले बिद्यार्थी पढ्न आउँदैनन्। उनीहरुसँग न्यानो लुगा छैन,’ गोल्चस्थित भीमसेन निमाविका शिक्षक दीपक तामाङले भने, ‘यहाँ विद्यार्थी र विद्यालयलाई सहयोग गर्न कुनै संस्था आइपुगेका छैनन्।’
भूकम्पले खण्डहर बनेको पाङताङ बजार अहिले त्रिपाल, टेन्ट र जस्ताको टहरोमा विस्तारित छ। भूकम्पले सडक अवरुद्ध हुँदा तिहारसम्म त गाउँलेले किनमेलमा ठूलो कष्ट भोगे। स्थानीय आफैं जुटेर सडक मर्मत गरेपछि अहिले कात्तिकेसम्म नियमित बस, मालबाहक गाडी चल्न थालेका छन्। टाढा भए पनि लामो यात्रा हिँडेर किनीखान समस्या छैन। ‘उसै पनि दुःखमा थियौं। भूकम्पले दुःखको पहिरो ल्यायो,’ पाङताङका युवा प्रेम तामाङले दुःखेसो पोखे।
कतै बाँडिए पनि धेरै गाउँमा बाँडिएको छैन। सरकारले पूरा रकम नपठाएकाले सबैले पाउन नसकेको गाविस सचिवहरु बताउँछन्। खानेपानीको समस्या उस्तै छ। भूकम्पले पानीको स्रोत सुक्दा हाहाकार मच्चिएको छ। एक गाउँमा मात्र होइन सबैतिर खानेपानीको समस्या छ। गाउँलेहरु तीन किमी टाढासम्म पुगेर पानीको जोहो गर्न बाध्य छन्। ‘खाना, नाना, छाना अभावले छट्पटिएका गाउँले चिसोले मर्न लागिसके,’ गुम्बा, हगाम र बराम्ची गाविसको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका सचिव ध्रुव थापाले भने।
– See more at: http://nagariknews.com/feature-article/story/51536.html#sthash.jMzeinjm.dpuf
By जागरण मिडिया सेन्टर in अन्य, दलित समाचार on December 31, 2015 .
← प्राप्त अधिकारलाइ संस्थागत गर्नुपर्छ ः उपप्रधानमन्त्री मैनाली	पर्वत जिल्लाको दक्षिणी भेगमा बालीघरे प्रथा अझै कायमै →